DHAGEEYSI:Musuq-maasuqa Saxaafadda iyo kaalinta ay dowladda ka qaadato -
HomeArimaha bulshadaDHAGEEYSI:Musuq-maasuqa Saxaafadda iyo kaalinta ay dowladda ka qaadato
DHAGEEYSI:Musuq-maasuqa Saxaafadda iyo kaalinta ay dowladda ka qaadato
January 17, 2019 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Idaacadda VOA ayaa daboolka ka qaaday musuqmaasuqa ay ku hayaan madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan xafiiska Madaxweynaha iyo mid Ra’isul wasaaraha. Arrintan oo ah mid aad looga warhayay ayaa markii ugu horreysay ay idaacadda VOA ka sameysay barnaamij gaar ah iyadoo wareysiyo la yeeshay madaxda suxuufiyiinta Soomaaliya iyo qaar ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho.
Weli ma dhicin taariikhda sida ay ugu dhiiradaan xukuumadda hadda talada haysa in ay si toos ah u laaluushto saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
RW Kheyre ayaa $5,000 oo doollar ugu iibiyay gabarta soo tebisa wararka xukuumadda abaalmarinta sanadka taasoo lagu guddoonsiiyay bishii hore magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa noqotay mid ay aad ula yaabeen suxuufiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale laga maalgeliyaa xafiiska warbaahinta ee Madaxweyne Farmaajo muuqaalo laga ceebeeyo madaxdii hore iyo siyaasiyiinta ka fekerka duwan dowladda Farmaajo Iyo Xasan Kheyre. Waxayna noqotay mid iska caadi ah oo aanan la qarin, waxaana taa markhaati ka ah sida ay saxaafadda madaxa bannaan aanay uga hadal boobkii wasiirka Maaliyadda iyo RW Kheyre oo si cad oo aan gabasho lahayn u lunsaday $42 kun oo doollar.
Halkaan ka dhageyso Warbixta: